Ukuthengiswa Kwezakhiwo Nezindawo Zokuxhumana | Martech Zone
UDoug ukhulume kokuthunyelwe kwakamuva ukuthi kuqinile kangakanani ukuhlanganiswa nokuzenzakalela kuzoba ukhiye kubathengisi be-imeyili. Sisebenza nabathengisi beReal Estate futhi yilokho kanye abakufunayo. Izinto ezimbalwa okufanele uzazi mayelana ne-real estate:
Abathengisi bezindlu ababona ochwepheshe bezobuchwepheshe futhi abanawo umnyango we-IT ongabiza uma bedinga usizo. Bangosomabhizinisi, basebenzise ubuchwepheshe ngokushesha, futhi njalo balinganise umthelela. Imvamisa bangabakhangisi abayinkimbinkimbi kakhulu - ngoba imali abayitholayo incike kuyo.
Abathengisi bezindlu sebenza ngamamaki. Zonke izindleko ezenziwe kumthengisi omusha wezokukhangisa noma ubuchwepheshe yimali engaphandle kwemali yabo yenzuzo ekhaya elithengisiwe. Ngenxa yalokho, baqikelela kakhulu ngamathuluzi abawasebenzisayo, ukuthi kulula kangakanani ukuwasebenzisa, kanye nomthelela abawenzayo ekuthengisweni.
Ngenxa yalokhu, basiqhubele phambili ukuthuthukisa ubusuku nemini. Manje sesiphusha ngokuzenzakalela "Ukufakwa ohlwini kosuku" kumakhasimende ethu e-real estate Facebook wall kanye Twitter ukusakaza. Lokhu kungenye yezinhlu zabo futhi kuxhunywe emuva ku-a ukuvakasha okubonakalayo esiyisingatha ikhasimende lethu. Lapho sithuthukisa lesi sici, besingenasiqiniseko sokuthi abangani abalalelayo bazoba kanjani lapho bebona uhlu lwempahla odongeni lwabo.
Kuyavela, kwamukelwa kakhulu! Amanxusa ethu amaningi athola imibono cishe nsuku zonke. Abaveli eqenjini elifanayo labantu futhi kwesinye isikhathi abalona uhlobo lokuphawula umthengi angafuna ukuzwa (njengokuthi "udinga ukuhlanzwa") kepha ukuba khona kwengqondo komenzeli wezezakhiwo kubaluleke kakhulu futhi ukuba nengxoxo eqhubekayo mayelana ukufakwa kuhlu kwabo kubagcina ngaphezulu.
Our insizakalo yokumaketha ingcebo manje ihlanganiswe ne-Twitter, i-Youtube (sikhiqiza ngamandla amavidiyo avela ezithombeni ezifakwe kuhlu), kanye nezinsizakalo zokuthengiswa kohlu lwezakhiwo. Imiphumela ibe mihle - amaklayenti ethu abone ukwanda okungama-25% enanini lokubukwa kwamakhasi ohambweni olubonakalayo, umbhalo ongenayo nemibuzo yamahhala. Le mpendulo yangimangaza ngandlela thile futhi yakhombisa ngokusobala ukuthi ukuhlanganisa imithombo yezokuxhumana kwimizamo yakho yokumaketha (noma ebhizinisini lezitini nodaka kakhulu) kungaba nomthelela omkhulu kumkhiqizo wakho.
Nansi okukodwa okuzenzakalelayo Amavidiyo we-Youtube Real Estate:
Ingxenye enhle yalokhu ukuthi ikhasimende liyakwazi ukukwenza konke - i-WordPress, i-Mobile, i-Twitter, i-Facebook, i-Youtube - konke ngokuchofoza okukodwa kwegundane. Akudingeki bangene ngemvume kuhlelo lokusebenza ngalunye ngokuzimela isikhathi ngasinye - bangavumela ukuhlanganiswa kwe-akhawunti kanye bese bashicilela ngokuzenzakalela. Sihlanganise ividiyo ekhombisa ukusebenza kwayo.
Tags: imininingwane yasekhaya ledijithaliukuthengisa izindlui-agent ye-real estateukumakethwa kwezindluukuvakasha kwe-real estatesocial mediaezokuxhum ukumaketha ingceboukuvakasha okubonakalayo